Wild Atlantic Way, làlana amoron-tsiraka any Irlandy | Vaovao momba ny dia
Wild Atlantic Way, làlana amoron-tsiraka any Irlandy
Mariela Carril | | mpitarika, Irlandy
Fomba tsara hijerena ny tontolo maitso sy tsara tarehy any Irlandy ny fanofana fiara. Voalohany dia tsy maintsy jerenao ny faritra amin'ny firenena tianao hotsidihina ary avy eo azo antoka fa toerana manintona maro no miseho ary ankehitriny, ankoatry ny maro zotra fizahan-tany izay ampifanarahana amin'ny tombontsoan'ny mpitsidika.
Noho izany, nanolotra antsika i Irlandy hahafantatra peninsulas, hisitrika amoron-dranomasina, hijerena hantsana, faritra lavitra misy tranobe megalithic, bay ary fitahiana avy amin'ny morontsiraka Atlantika mahafinaritra. Izany no Làlana Atlantika Wild.
1 Làlana Atlantika Wild
2 Kastily manamorona ny Làlan'ny Ala Atlantika
3 Fonenana manamorona ny Làlan'ny Ala Atlantika
Làlana Atlantika Wild
Izany dia zotra izay manodidina ny 2600 kilometatra ka io no iray amin'ireo làlana morontsiraka lava indrindra eto an-tany. Mandehana ny morontsiraka andrefan'i Irlanda manomboka amin'ny Saikinosy Inishowen any avaratra ka hatrany amin'ny tanànan'i Kinsale, ao amin'ny County Cork, any atsimo.
Fitsidihana tena manokana ho an'ireo tia ny toetra sy ny faritra manodidina azy. Ny tany sy ny ranomasina dia mivondrona amin'ireo kilometatra rehetra ireo izay mampiseho ny fahasamihafan'izy ireo (vokatry ny fihaonana tsy tapaka teo anelanelan'ny rano sy ny tany, eo anelanelan'ny rivotra sy ny morontsiraka), ny fanaovana sokitra hantsana, ny fanapahana ny bay, ny morontsiraka manimba, ny fampiraisana ny vohitra, ny tsangambato taloha ary ny zava-mahatalanjona hafa.
Mandeha ara-potoana ny Làlana Atlantika dia manomboka eo amin'ny Saikinosy Inishowen, ao amin'ny County Donegal, mamaky ny faritr'i Leitrim, Sligo, Mayo, Galway, Clare, Limerick ary Kerry mandra-pahatapitry ny Cork. Azonao zaraina ho Teboka 14 na dingana manaraka ireo 2600 kilometatra ireo. Soraty ireo tranokala tandindon'ny tsirairay amin'izy ireo:
Avy any Derry ka hatrany Letterkenny: ny Saikinosy Inishowen.
Avy amin'ny Letterkenny ka hatrany Bunbeg: Head Fanad.
Avy any Bunbeg ka hatrany Donegal City: ny Morontsiraka ligy Slieve.
avy any Donegal mankany BNallina: Donegal Bay sy Sligo.
Avy any Ballina ka hatrany Belmullet: Erris.
Avy any Belmullet ka hatrany Westport: ny Nosy Achill ary Clew Bay.
Avy any Westport ka hatrany Clifden: seranan-tsambon'i Killary.
Avy any Clifden mankany Galway: Connemara.
Galway mankany Kilkee: Ilay Burren ary West Clare.
Avy any Kelkee ka hatrany Tralee: ny Toeram-panjakan'i Shannon.
Avy any Tralee ka hatrany Castlemaine: ny Saikinosy Dingle.
Avy any Castlemaine ka hatrany Kenmare: Ny peratra an'i Kerry.
Avy any Kenmare ka hatrany Durrus: Beara sy lohan'ny ondry.
Avy any Durrus ka hatrany Kinsale: West Cork.
Bays, tendrombohitra, tanàna amoron-tsiraka, faritra be vato, vatolampy mahasosotra, jiro, nosy, valan-javaboary, moron-dranomasina, trozona, feso, fety ara-kolontsaina ary ala maitso. Somary amin'ny zava-drehetra. Amin'ity lalana ity dia hanana toerana misy ny ranomasina milamina ianao ary ny hafa, mitabataba, manaitra. Mba hahazoana tombony azo avy amin'izany, ny Birao Mpizahatany Irlandey dia manome anao ny Pasipaoro Wild Atlantic Way, fahatsiarovana tsy manam-paharoa hamita ny fitsidihana.
Pasipaoro 10 euro ihany ny vidiny ary ianao dia mividy azy amin'ny paositra sasany amin'ny lalana. Izy io dia boky manga misy ny sarin'i Irlandy eo amin'ny fonony izay apetakao ireo tombokase azonao amin'ny fotoana ividiananao ary mifanaraka amin'ny toerana samihafa na Discovery Points (araka ny iantsoana azy ireo), amin'ny zotra. Manisy tombo-kase ny toerana vangianao ianao ary ny tsara indrindra dia ny famenoana ireo tranonkala 188 misy tombo-kase 118.
Rehefa tonga any amin'ny 20 voalohany ianao dia afaka mifandray amin'ny Tourist Office ary omena fanomezana ianao. Pasipaoro Io no porofo fa nitety an'ity faritr'i Irlandy ity ianao, fa nanao dia 2500 kilometatra amoron-tsiraka ianao ary nahazo izany Taratasy fanamarihana Wild Atlantic Way, ofisialy tsara. Inona koa, misy fampahalalana mahasoa momba ny zotra sy ny manintona azy.
Ny pasipaoro tsirairay izay amidy dia manana isa manokana ary ny filamatra dia ny hisoratra anarana ao amin'ny tranonkalany satria amin'ny farany afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana hahazoana fialan-tsasatra mandritra ny androm-piainana amin'ny Làlan'ny Ala Atlantika.
Kastily manamorona ny Làlan'ny Ala Atlantika
Hatreto dia hitantsika fa ny làlan'ny morontsiraka dia mifantoka bebe kokoa amin'ny natiora fa ny marina dia hahita lapa ihany koa ianao. Betsaka, fa fito no miavaka indrindra. Ohatra, ao Donegal dia azonao atao ny mijanona na misakafo any amin'ny trano fandraisam-bahinin'ny trano mimanda, ny Hotely Solis Lough Eske. Trano fandraisam-bahiny misy kintana dimy izy io nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary fananan'ny fianakavian'i O'Donnell, ray avy any Donegal.
Any Galway koa misy ny Castle Ballynahinch, koa nivadika hotely. Mipetraka eo amoron'ny Owenmore River, amin'ny tany izay an'ny fianakavian'i O'Flaherty taloha. Ao Clare, trano fandraisam-bahinin'ny trano mimanda hafa no Gregan Castle. Trano fandraisam-bahiny tsara ny mijanona ao amin'ny Burren, toerana vatosokay tsy azo ihodivirana izay nanentana an'i JRR Tolkien hanoratra Tompon'ny peratra.
Ao Kerry no misy ny Ballyseede Castle, any Tralee. Toerana kanto izy, hotely kintana efatra, tranon'ny Earls of Desmond teo aloha ary, hono, miaraka amin'ny matoatoa hoy izy ireo! Manaraka, any Cork no Desmond Castle, sokafy amin'ny mpitsidika raha tsy misy torolàlana. Earl of Desmond no nanorina azy tamin'ny taonjato faha-XNUMX fa ny Museum Tranon-divay Iraisam-pirenena ankehitriny. ny Dunguaire Castle, ao Galway, dia trano tilikambo mahazatra natsangana tamin'ny 1520 avy amin'ny fianakavian'i O'Hynes. Toerana fihaonana ho an'i WB Yeats sy Lady Gregory, teo amin'ny tampon'ny fifohazan'ny Celtic.
Ary farany, ao Leitrim no Castle Parke, eo amoron'ny Lough Gill. Izy io dia trano mimanda iray tamin'ny vanim-potoanan'ny Plantation (fotoana nitondran'ny Anglisy anglisy sy mpifindra monina Wales mba hipetraka any Irlandy, naka ny taniny tamin'ny fianakaviana Irlandy). Raha ny marina, ny tompon'ireo tany manokana ireo dia nentina tany London ary novonoina tamin'ny 1591.
Fonenana manamorona ny Làlan'ny Ala Atlantika
Amin'ity làlana ity dia afaka mijanona amin'ny aina sy mahafinaritra ianao Bed & Breakfast, manofa trano tsy miankina atolotra ny mpizahatany na trano fandraisam-bahiny. Ao amin'ny tranokalan'ny lalan'ny morontsiraka no ahafahanao misafidy ireto safidy telo ireto.
Tadidio fa raha tsy mitondra ny fiaranao mankany Irlandy ianao dia afaka manofa karana iray na koa karavasy aza, mba hahasalama kokoa azy na hanintonana azy. Ny orinasan-tseranana West Coast Camper Van dia manana andian-tsarety ary manome ny fahafaha-maka ny fiara amin'ny teboka maro manamorona ny làlana amoron-tsiraka. Mikasika ny fiara dia manana orinasa maro any Irlandy ianao (Avis, Sixt, Europcar, sns.).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Irlandy » Wild Atlantic Way, làlana amoron-tsiraka any Irlandy
Fitsidihana ny torapasika any Dubrovnik
Toeran-dranomasina eropeana 6 handosirana